By OnDoctor Editor	 On Dec 18, 2019 Last updated Aug 26, 2020
-Activated Charcoal ? ဆိုတာ အရင်ကတော့ အဆိပ်တောက်ဖယ်ပေးတဲ့ Agent တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ‌ဆေးပညာမှာ Poisoning Case ☠️ တွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ ခုခေတ်မှာတော့ ဝါးမီးသွေးကို ကျန်းမာရေးအရရော အလှအပရေးရာအတွက်ပါ အသုံးပြုလာတာက Trend တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီရှင်။
Bamboo Charcoal ဝါးမီးသွေးက ဘာတွေကောင်းလဲ?
အဓိကကတော့ ဝါးမီးသွေးဟာ Negative charge element ဖြစ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အဆိပ်အတောက် Toxins & Waste Materials တွေကို စုပ်ယူပေးပြီး Flush down လုပ်ပေးပါတယ်။ သဘာဝနည်းအရ Detox လုပ်ပေးတာပေါ့..
အသားအရည်ကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်တောက်ကင်းစင်နေတော့ Skin ကောင်းဖို့ Inner Beauty အနေနဲ့ အထောက်အပံ့ဖြစ်‌စေတာပေါ့နော်။
နောက်တစ်ခုကတော့ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ အဆီတွေ၊ preservatives တွေကို အူလမ်းကြောင်းကနေ စုပ်ယူမှုနည်းအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဝါးမီးသွေးဟာ Powerful Anti-aging Element ပါရှင်။ အဲတော့ အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်ရှင်။
Activated Charcoal က power type, tablet type တွေနဲ့မျိုးစုံ လာပါတယ်။